परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित भए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने (अडियोसहित) हामीले यसमा लुकाउनुपर्ने छैन । हिजो जतिखेर हस्ताक्षर गरिएको थियो, त्यो बेलाको जस्तो परिस्थिति नेपालको छैन । आजको परिवेशमा जनताबाट उठेका, विज्ञबाट उठेका कुरालाई ध्यान दिएर एमसीसी परिमार्जन गर्ने दिशामा नै लैजानु पर्दछ । शुक्रबार, भदौ २५, २०७८
चाडबाड, चिसो र कोरोना : खानपानमा कसरी ख्याल गर्ने ? सोमबार, कात्तिक १७, २०७७ चाडबाडको समय भएकाले मानिसहरुको खानपान पनि सामान्य बेलाको भन्दा फरक छ ।
उपभोक्ता बनेर मन्त्री बजार पुगेपछि..... बिहिबार, असोज १, २०७७
के हलियाहरू साँच्चै मुक्त भए ? बिहिबार, भदौ २५, २०७७ सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरी १२ जिल्लामा नेपाल सरकारले १६ हजार ९ सय ५३ घरधुरीलाई हलियाको सूचीमा राखेर पुर्नस्थानपाको काम अघि बढाएको थियो ।
के, प्रदेश दुईमा सरकार परिवर्तन हुन्छ ? बुधबार, भदौ २४, २०७७ सबै कुराको समिक्षा हुन्छ । समय आएपछि सबैको समिक्षा पार्टीले गर्छ र पार्टीले समिक्षा गरेर मात्र यो विषयमा निर्णय लिन्छ । अहिले चाँहि त्यस्तो कुनै मुद्दा उठेको छैन । कसै कसैले व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो कुरा उठाउँछन् होला ।
सचिवालय र स्थायी कमिटिले गर्न नसकेको काम कार्यदलले गर्छ ? बिहिबार, भदौ ४, २०७७ हैन, अब राजिनामा दिने छोड्ने कुरा नभएर अहिलेका पार्टीका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र पार्टीलाई अगाडी बढाउने कुरामा नै हामी अगाडी बढ्छौं ।
दुई अध्यक्षको टकराब, राष्ट्रपति विवादमा तानिँदै आईतबार, असार २१, २०७७ समस्या भयो । पार्टीभित्र तपाईँहरू पार्टी एकताको पक्षमा नेताहरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने पक्षमा लाग्नूस् भन्नुभयो । गुटबन्दीलाई प्रोत्साहित नगर्ने गरी प्रस्तुत हुनूस् भन्नुभयो ।
रुकुम घटनामा जति ठूलो नेता जोडिएपनि प्रहरी प्रभावमा पर्दैन बिहिबार, जेठ २२, २०७७ नेपाल प्रहरी आफैले त थप दरबन्दीको व्यवस्था, साधन स्रोतको व्यवस्थापन र संगठन संरचनामा परिवर्तन गर्न सक्दैन । मन्त्रालयले निर्णय गरे स्थापना गर्न सकिन्छ ।
आइसोलेसन बेड भरिंदै, अब घरमै हुन्छ सङ्क्रमितको उपचार सोमबार, जेठ १९, २०७७ अस्पतालमा उपचारका लागि बेड भरिएपछि थपिएका संक्रमितलाई अब कसरी उपचार गर्ने ? सिंगो सरकार लागि समस्या खडा हुँदैछ । संक्रमणको गति र सरकारको तयारी बीच कतै पनि तालमेल देखिएको छैन । अब सरकार कसरी अगाडी बढ्छ ? राजन रुचालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतसँग गर्नुभएको कुराकानी ।
बन्दाबन्दीको पालना गर्नू, पानी धेरै पिउनू बुधबार, वैशाख ३, २०७७ सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको नागरिकबाट पालना हुनुपर्‍यो । हात पटकपटक सफा गर्नुपर्‍यो । पानी प्रश्स्त पिउनुपर्‍यो । यदि घाँटीमा सङ्क्रमण छ भने त्यसलाई पेटमा लगेर एसिडले मार्छ भन्ने गरिएको छ ।
छाउपडीविरुद्ध सरकार कठोर कदम चाल्दै शुक्रबार, माघ १०, २०७६ पहिलो कुरा महिला दिदीबहिनीले, महिलाहरूले आफू छाउमा जान रोकिनु पर्यो । दोस्रो कुरो घरपरिवारका सदस्यले कुनै सदस्यले पठाउँछ भने म जान्न, म गएँ भने म पनि फौजदारी कानुनको दायराभित्र पर्छु र मलाई पुलिसले पक्राउ गर्छ र थुन्छ भन्न सक्नुपर्यो ।
महाअभियोग लगाउन तुम्बाहाङ्फेको चुनौती सोमबार, पुस २८, २०७६ आफूलाई सभामुख बनाउने निश्चित नगरेसम्म उपसभामुखबाट राजीनामा नगर्ने बरु आफूलाई हटाएर देखाउन नेताहरुलाई तुम्बाहाङ्फेले चुनौति दिनुभयो ।
बङ्गलादेशसँग रेल र बसमार्फत जोडिँदै नेपाल मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६ नेपालबाट बङ्गलादेशमा ढुङ्गा निकासीको ठूलो सम्भावना छ । यसका लागि नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी महाभारत पर्वत शृङ्खलाका कतिपय पहाडहरु वातावरण तथा भूगर्भविद्हरूको सल्लाहमा कटान गरी त्यहाँको ढुङ्गा बङ्गलादेशमा निकासी गर्न सकिन्छ ।
नेपाल-भारतबीच ७१ स्थानमा सीमा विवाद शनिबार, कात्तिक २३, २०७६ नभए भोलि भारतले बनाएको र हाम्रो भूमि मिचेकै नक्सामा सरकारले सहमति जनाउने हो भने नेपालमा झनै आगो बल्छ । त्यसको हामीबाट र आम जनताबाट विरोध हुन्छ । हाम्रो सरकारबाट त्यो गल्ति हुन्छ भन्ने लाग्दैन । यदि कसैले त्यस्तो गल्ति गर्छ भने त त्यसको मूल्य उहाँहरुले चुकाउनु पर्छ ।